လေဖြတ်ပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 14/11/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတခုပါ။ စိတ်ကျဝေဒနာခံစားရခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများပြားခြင်း၊အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊နောက်ခံအကြောင်းရင်း(ရောဂါ)တစုံတရာရှိခြင်းအပါအဝင် အကြောင်းခြင်းရာ များစွာကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ တခါတရံလည်း လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေဖြတ်ဝေဒနာခံစားရပြီးနောက်ပိုင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်းပြဿနာနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
လေဖြတ်ပြီးနောက် ဦးနှောက်အတွင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၊ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းအချို့ ထိခိုက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဦးနှောက်တွင်း သွေးလှည့်ပတ်မှုပြောင်းလဲသွားခြင်းတို့ကြောင့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ဦးနှောက်တွင်း သွေးယိုစီးမှုကြောင့် လေဖြတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုးမှာ လေဖြတ်ပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစားလေးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ :
ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း : အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲလို့ ခေါင်းကိုက်လာတာပါ။
ကြွက်သားများ တင်းမာမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း : ဒီလိုခေါင်းကိုက်ခြင်းမျိုးကတော့ အလွယ်တကူ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
မိုင်ဂရိန်းခေါင်းကိုက်ခြင်း : ဒီအမျိုးအစားခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အင်မတန်မှ နာကျင်စေတဲ့အပြင် ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့နဲ့ပါ တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ဆေးပြင်းပြင်းသုံးပြီး ကုသပေးလေ့ရှိပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းကို ကုသဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း : သွေးကျဲဆေး ဒါမှမဟုတ် သွေးကျဆေးတွေပါဝင်ပါတယ်။
လေဖြတ်ပြီးခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားရတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ပိုမိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ်လက္ခဏာဟုတ်မဟုတ် သိစေနိုင်ဖို့နဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ကုသမှုကို ခံယူစေနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။ အများအားဖြင့်တော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ ဆိုးရွားပြင်းထန်ပြီး စိတ်ပူပန်ရမယ့် ပြဿနာတခု မဟုတ်တဲ့အတွက် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းရင်းကို စောကြောပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုကို ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကုသမှုပုံစံကတော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားပါတယ်။ အဆိုပါ ကုသမှုနည်းလမ်းတွေကတော့…
ဆေးဝါးတွေဟာ နာကျင်ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အနားယူခြင်း : အတွေးတွေလွန်နေတာကို ရပ်တန်းကရပ်ပြီး ဇိမ်ကျတဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ သက်တောင့်သက်သာအနားယူပါ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ : ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အတွေးအကြံတွေ၊အမူအကျင့်တွေနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း : လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ သင့်စိတ်နဲ့ခန္ဓါကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်ရုံသာမက ကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်း တိုးစေပါတယ်။ သင်နဲ့လိုက်လျောကိုက်ညီတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သော အစားအစာများ : ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေကို ပိုစားပေးပါ။
သင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာပိုဆိုးလာရင် သို့မဟုတ် ခေါင်းကိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။ ဒါတွေဟာ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာတခုခုရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားရပြီဆိုရင် နောက်ထပ်တခါ လေဖြတ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရတာလားဆိုတာကိုတော့ တချက်သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။ဦးနှောက်တွင်းသွေးယိုစီးမှုကြောင့် လေဖြတ်ခြင်းမှာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ချေ ပိုများပြီး လေဖြတ်ပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ ကုသပေးလို့ရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတခု ဖြစ်ပါတယ်။
https://www.stroke.org.uk/what-stroke/common-problems-after-stroke/pain-and-headaches. Accessed May 20, 2017.
Paciaroni M, Parnetti L, Sarchielli P, Gallai V. Headache associated with acute ischemic stroke. The Journal of Headache and Pain. 2001;2(1):25-29. doi:10.1007/s101940170043.
Headache Information Page.
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Headache-Information-Page. Accessed May 20, 2017.
Pain management after stroke.
https://strokefoundation.org.au/-/media/A20E0EE19EC14952A93264A8773D41B5.ashx?la=en. Accessed May 20, 2017.
သတိလက်လွတ် မနေသင့်တဲ့ Dementia ရဲ့ အစောပိုင်း လက္ခဏာများ
သွေးမြင် ရင် မူးလဲတတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ